Induction Heating Coils Famolavolana ny fanamafisam-peo famokarana
Home / Induction Heating Coils / Famolavolana coil fanafanana induction
Sokajy: Induction Heating Coils Tags: coil brazing coil, induction coils, famolavola coils famolavolana, Indonezianina fanalefahana, kofehy fanasitranana induction, indil coil mitifotra, coil fanindrona, famolavolana inductor, inductors
Na inona na inona endrika, habe, na coil fampidirana endrika ilainao dia afaka manampy anao izahay! Ireto misy vitsivitsy monja amin'ireo volavolan-coil an-jatony niarahanay niasa. Coil pancake, coil helical, coiler concentrator… fantsom-bozaka boribory, boribory ary mahitsizoro… Fihodinana tokana, fihodinana dimy, fihodinana roa ambin'ny folo… eo ambanin'ny ID 0.10 ka hatramin'ny ID 5 mahery… ho an'ny fanafanana anatiny na ivelany. Na inona na inona takinao, alefaso aminay ny sary sy ny antsipirihany ho an'ny teny nalaina haingana. Raha vaovao ianao amin'ny fanafanana fampidirana dia alefaso aminay ny faritra misy anao ho fanombanana maimaimpoana.
Amin'ny lafiny iray, ny famolavolan'ny kodiarana amin'ny fanamafisana ny indostria dia miorina eo amin'ny fivarotana lehibe amin'ny data empirical izay ny fivoaran'ny loharanom-bary tsotra toy ny
ny bobongolo solenoid. Noho izany, ny famolavolan'ny kodiarana dia mifototra amin'ny traikefa.
Ity andian-dahatsoratra ity dia manamarika ny fiheverana elektrika fototra amin'ny famolavolana ny inductors ary manoritsoritra ny sasany amin'ny fihodinana mahazatra ampiasaina.
Ny inductor dia mitovy amin'ny transformer voalohany, ary mitovy ny asany
ho an'ny mpampianatra faharoa (Fig. 1). Noho izany, maromaro amin'ireo toetra ireo
ny transformer dia ilaina amin'ny fampandrosoana ny tari-dalana ho an'ny famolavolan'ny kodiarana. Iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny transformer ny zava-misy
Ny fifamatorana eo amin'ny rivotra dia mifanohitra amin'ny kianjan'ny elanelana eo anelanelan'izy ireo. Ankoatr'izay, ny fitohizan'ny ambaratonga voalohany amin'ny transformer, izay ampitomboina amin'ny isa lehibe indrindra, dia mitovitovy amin'ny eo amin'ny ambaratonga faharoa, mitombo amin'ny isa dingana faharoa. Noho ireo fifandraisana ireo, dia misy fepetra marobe izay tokony hotadidina ao an-tsaina rehefa manamboatra coil
1) Ny kodiarana dia tokony hampifandraisina amin'ilay ampahany araka izay azo atao mba handefasana angovo azo antoka. Tsara ny manamarika fa ny isa maromaro indrindra amin'ny tebiteby maromaro dia manindry ny arofanina ao amin'ilay faritra tokony hafanana. Ny famafazana ny tavy eo amin'io teboka io, ny avo indrindra dia ny ankehitriny voavoly ao amin'ilay ampahany.
2) Ny teboka lehibe indrindra amin'ny tadin'ny flux ao anaty coils solenoid dia mankany amin'ny afovoan'ny coil. Mifantoka ny randran-drano
Ao anatin'io bobongolo io, manome ny tahan'ny hafanana farafahakeliny any.
3) Satria ny rivotra mifantoka indrindra amin'ny kodiarana dia mihodina sy mihen-dàlana lavitra azy ireo, ny foiben'ny geométrique amin'ny coil dia lalana malemy. Noho izany, raha ny ampahany dia tokony hametrahana foibem-pahefana ao anaty kodiarana, ny faritra akaiky kokoa ny kodiarana dia mampifanaraka ny lin-dàlana maromaro kokoa ary mety ho hafanana amin'ny avo lenta kokoa, fa ny faritra
Ny ampahany amin'ny fihenan-tsakafo tsy dia mafana loatra amin'ny farafara kely kokoa; Ny lamina vokarina dia aseho amin'ny endrika 2. Ity vokatra ity dia misongadina kokoa amin'ny fanamafisana ny fampidirana hafanam-be.